Ndeipi iyo mitemo inokosha yeAmazon keyword ranking algorithm kuti ishandiswe pakuita?
Zvinonyatsozivikanwa kuti nyika yemazuva ano Search Engine Optimization inotungamirirwa nehuwandu hwehuwandu hwehuwandu, in-in turn driven with proper keyword research. Kana ukabatwa nenzira yakarurama, kusarudza zvakakosha zvikuru asi zvisingakwikwidhi mazwi makuru zvinogona kusundira anenge wese webhusaiti kana bhuroti kusvika kumusoro kwekutsvaga. Asi kana zvasvika ku Amazon mazita ezvinyorwa, zvinhu zvose zvachose zvakaparadzana - visualiser votre fiche de paie exemple. Chinhu chacho ndechekuti Amazon ine zita rake rekushongedza shanduro yegorgorithm (inozivikanwawo seK9). Zvinoreva kuti hapana dambudziko rose rekubudirira kwezvinhu zvose zvinotsvaga injini (seGoogle pachayo, pamwe ne Yahoo, Bing, nezvimwewo), kwete kuti iyo yakakosha inoshandiswa neyepasi guru ecommerce platform. Asi nzira yekuziva sei kuti ndezvipi izvo zvinoita kuti kuve nekutsvaga kwekutsvaga nzvimbo?
Zvinosuruvarisa, hapana injini yekutsvaga ichazombofumura chimiro kana kunyange rwakanyatsorongodza runyoro runobatanidza mumwe nomumwe wezvinhu zvinowanikwa mune zvavanonyatsotsvaga pakutsvakurudza. Uye kana ichisvika kuAmazon uye mazita ezvinyorwa zvinyorwa zvakashandiswa pane uko, zvinhu zvinoramba zvakangofanana - izvo zvingave zvakavanzika zvakachengetedzwa zvisati zvarondedzerwa nekuda kwekuti zvingangoerekana zvava kutengeswa manipulations kuburikidza nezvose zvakatarisana nenzira. Ndinoreva nzira imwe chete yekuwana mifananidzo yakawanda-kana-yakajeka yemitemo yakawanda inotonga pamusoro peAmerica inoshandiswa nekutsvakurudza kunowanzoitwa. Zvichinyatsojeka, zvakanakisisa zvebasa rekutengeserana nevatengesi vepaIndaneti, uye SEOs dzepamusoro dziri kushandisa kutonga kwechigunwe - kungoona kuti chii chiri kuitika neAmazambique, iyo inokosha yekutarisa uye mamwe ose emitemo inogona kugadziriswa - nenzira yega zvishoma nezvishoma uye nzira dzinoshanda chaizvo pakuita.
Amazon ine nheyo yayo yechinyorwa kushandiswa kwegoridhethi iri kutengesa pamitemo miviri mikuru inotarisana neKushanda kwezvinhu uye Relevance factors.
1. Zviitiko zveKusarudzo - zvinoshandiswa kuongororwa zvinodiwa nevatengi kana kudiwa kwechigadzirwa chimwe nechimwe chakanyorwa muAmazon. Pakati pevamwe, kunyanya Click-Through-Rate, kutendeuka, uye kubudirira kwekutengesa kunozivikanwa senheyo huru dzekushanda pamusoro apo.
2. Zvikonzero zveKutenderera - zvakabatana zvakakodzera kushandiswa kwakakodzera kwemashoko makuru uye nzira yakakodzera yekuiswa mukati memaji emagetsi. Uye pano ndiwo maitiro eAmerica uye nheyo yechinyorwa kushandiswa kwegoridhethi - kunyanya iyo michina inoenderana ne shopper's search query yakanakisisa yezvose inopiwa zvikwata zvakakwirira.
Hapana chikonzero chekutaura kuti Amazon inoramba ichichitevera nzira yakakosha yekugadzirisa mazwi ekukosha. Uye iyo algorithm inoramba ichishandurwa ichimirira pane zvazvinodiwa zvevashambadzi vemunharaunda. Kunyange zvakadaro, hezvino mamwe mazwi ezvinyorwa zvinokonzera tsvakiriro yekutsvaga kuAmazon inogona kugara ichifanotaurirwa nechokwadi:
Mutengo Wezvinyorwa zvakabatanidzwa nechinonyanya kutsvaga mazwi ane simba rakasimba, mukuderera kwekukosha kwekukosha;
Kudzokorora mazwi makuru hakuzovi kukuvadza panzvimbo yako yose, asi izvi hazvisi zvakakwana zvezviito zvekupa chero zviitiko zvinooneka kuAmazon;
Kuita zvakakodzera kushandiswa kwemashoko akareba-mairi keywords anonyanya kuiswa mukati memitemo yako huru yemutauro inogona kuchinja zvakanyanya kufambira mberi kwako;
Kubatanidza mukati kunenge kuchiri chinhu chinokosha pano, saka iva nechokwadi chokuti unongova nekunyoresa zvinyorwa zvese zvinyorwa. Zvechokwadi, ivo vanofanira kukushandirai nekuda kwezvinhu zvinokurudzirwa uye zvinogona kuvandudza nyaya zvakanyanya.